हेलिकप्टरबाटको उम्मेद्वारी निर्वाचन आचारसंहिता विपरित « Ok Janata Newsportal
हेलिकप्टरबाटको उम्मेद्वारी निर्वाचन आचारसंहिता विपरित
काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसो हेटौंडास्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटाको मनोनयन दर्ता कार्यक्रम चलिरहेको थियो ।
स्थानीय पत्रकारहरु आयोगको कार्यालय परिसरमै केन्द्रित थिए । एकाएक आकाशमा हेलिकोप्टरको आवाज आयो । हेलिकोप्टर डीआइजी कार्यालयमा रोकियो, जसमा थिए राष्ट्रियसभाका सत्तारुढ उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल ।
गृहमन्त्री बादल डीआइजी कार्यालयमा हेलिकोप्टरबाट ओर्लेर गाडी चढी आयोगको कार्यालयमा आए । उनले नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए । त्यतिबेलासम्म गृहमन्त्री थापाका प्रतिद्वन्दी डा. खिमलाल देवकोटाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका थिए ।
निर्वाचन आचार संहिताले के भन्छ ?
चुनावमा उम्मेदवार बन्ने क्रममा गृहमन्त्री थापाले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको विषयमा हामीले निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीलाई सोध्यौं, गृहमन्त्रीले चुनावमा यसरी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नु आचार संहिता विपरीत हो कि हैन ?
ती अधिकारीले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भएसँगै कानूनतः निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने बताए । चुनाव प्रचार–प्रसारमा आयोगको अनुमति लिएर चारपाङ्ग्रे गाडी वा घोडामात्र प्रयोग गर्न पाइने उनले सुनाए ।
तर, उम्मेदवार बन्न जाने व्यक्तिको हकमा उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै आचार संहिता लागू हुने उनको तर्क छ । आयोगका ती अधिकारी भन्छन्, ‘बादलजी उम्मेदवार दर्ताका लागि जानुभएको हो, पर्सिदेखि उम्मेवारहरुलाई आचार संहिता लाग्छ ।’
यद्यपि गृहमन्त्री थापाले चार्डर्ड गरेको हेलिकोप्टरको खर्च व्यक्तिगत वा एमाले पार्टीले व्यहोर्ने हो कि उनले सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हेरिनुपर्ने आयोगका ती अधिकारी बताउँछन् । सामान्यतः यो विषय नैतिक प्रश्न हुने उनले बताए ।
पूर्वमाओवादी नेता बादल सत्तारुढ एमालेका तर्फबाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्दैछन् । उता एमालेनिकट बुद्धिजीवीका रुपमा चिनिने डा. देवकोटाले चाहिँ माओवादी, काँग्रेस र माधव नेपाल समूहका तर्फबाट हँसिया–हथौडा चिन्हबाट चुनाव लड्दैछन् ।
देवकोटाका प्रस्तावक माओवादी र समर्थक नेपाली काँग्रेस छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाका प्रस्तावक मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल छन् ।
जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा वागमती प्रदेशसभाका ११० र स्थानीय तहका २३८ जना प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मतदान गर्नेछन् ।
यसअघि गृहमन्त्री थापा यही प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य थिए । माओवादी पार्टी छाडेर एमालेमा लागेपछि उनको पद खोसिएको हो । र, यही रिक्त स्थानमा बादल एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
गृहमन्त्री बादललाई दुई साताअघि नै एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, विपक्षी मोर्चाबाट संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटाको उम्मेदवारी घोषणा भएपछि बादल चुनाव लड्न हच्किएका थिए । अन्ततः एमालेले बादललाई नै उम्मेदवार बनाएको छ ।
बागमतीमा गृहमन्त्री थापा र विपक्षी उम्मेदवार देवकोटाबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । राष्ट्रियसभाको चुनावमा मतदान गर्ने वागमतीका ११० प्रदेश सांसदमध्ये एमालेसँग एक्लै ५७ सांसद छन् ।
तर, माधव नेपाल समूहबाट देवकोटाको उम्मेदवारी परेपछि एमालेका ५७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ओलीको पक्षमा ३४ जना र नेपालको पक्षमा २२ जना बाँडिने देखिएको छ । यसमा माओवादीका २३ र काँग्रेसका २२ सांसद जोड्दा ६७ सांसद हुन जान्छ, जुन ११० सांसदको बहुमत हो ।
प्रदेशसभामा साना दलहरूसँग ८ सिट छ । साना दलमध्ये तीन सिट रहेको नेमकिपाले कृष्णबहादुर तामाङलाई उम्मेदवार बनाएका कारण नेमकिपाको भोट बादल र खिमलाल दुबैले नपाउने निश्चित छ । प्रदेशमा तीन सिट र स्थानीय तहमा दुई सिट ओगटेको नेमकिपाको कुल मतभार १३२ छ ।
यो उपचुनावमा विवेकशील साझाको १४४, राप्रपाको १३२ र जसपाको ६६ मतभार छ । यसमध्ये राप्रपाबाहेक अरुको भोट बादलले पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहका कुल २३८ मतदातामध्ये एमालेसँग यसअघि एक्लै १३३ जना रहेकोमा देवकोटाको उम्मेदवारीपछि माधव पक्षका करिब ४५ जना देवकोटाको पक्षमा उभिने देखिएको छ । यसो गर्दा बादलको पक्षमा ८८ जना मात्रै रहन्छन् ।
स्थानीय तहका मतदातामध्ये काँग्रेसका ६८, माओवादीका ३३ र माधव पक्षका २४ जना जोड्दा १२५ पुग्छ । यो संख्या भनेको प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहका मतदाता (२३८) को पनि देवकोटाको पक्षको बहुमत हो । रातोपाटीबाट साभार